Download sezvo PDF Tumira neindaneti kwatiri
Product zita 12V Portable Car Vacuum Cleaner
Product uremu 500.00g
Product mavambo Ningbo, China
Makuriro Akaita kushandiswa Vehicle kushandiswa
Line urefu 160cm
Usage pezviitiko Dry nokutota Dual-kushandiswa
Zvimwe mabasa mvura uptake
ruvara White / Blue
Used zvakananga kubva motokari vakareruka panosangana
Complete pamwe yakakunakira kungonzwa uye wachika Sefa
kudzora ON / Off chinja, nyore kushandisa.
Kana uine mudzanga vakareruka chivhariso, sutu kumba, hofisi, kufamba uye motokari zvose
Simba uye rakasimba blower imba uye basa nzvimbo kushandiswa rinoda kunonyanyisa inotakurika mhepo simba. Great nokuti mhepo kuparadzirwa, nokuomesa makapeti nezvimwe nyorova hukawanika! Wet / Dry Car Vac otora 5.5 gave oz pamusoro liquid.Upholstery chishandiso uye guruva bhurasho vari vakakwana chokubvisa dzinovaraidza bvudzi, anopinza uye tsvina kubva motokari interior.Crevice chishandiso rinosvika pakati motokari seats.Lightweight uye bagless nokuda convenience.Great kukurumidza pakuchenesa parasikira mumotokari yako, rori kana SUV.
★ unesimba kubvisa & pasi pasi KUNYAUDZWA: The motokari Vacuum ane CE, ROHS advertising. 12volt, 120w, 4000PA kubvisa. 75db pasi ruzha. Anogona kunyatsokurukura wachenesa guruva mukati motokari.
★ MULTIFUNCTIONAL: The motokari Vacuum inotsigira Dry & Wet kushanda. 3 zvishongedzo (Long Mouth, Brush, Soft Long Tube), zvinoita kuchenesa hunde uye anogona kuchenesa pakona ose mumotokari yako. motokari ose vanofanira nomumwe!
★ WEHEAVY AKAGADZIRIRA KUITA BASA DESGIN: High waivako motokari Vacuum rakagadzirwa nemi mupfungwa. The Vacuum zviri nyore kuti vazvichengete, kushandiswa, uye akachena. The tsvina kanisita chinotanga achapesana ane bhatani uye mainozonodira kunze seconds. The vaisanganisira HEPA mhepo filters vari wachika uye nyore kuisa.
★ zvakakunakira ISHANDISEI: 4.5M (16,4 FT) simba netambo kunobatsira kuchenesa chero zvakaoma kuzviita nharaunda. Nyore kushanda, Just batidza / kure. Dzinoisa kuti mudzanga vakareruka chivhariso kupinda chero DC 12-Volt mudzanga vakareruka zvigadziko (motokari uye zvikepe) Zvinonzi dzinofambiswa kuburikidza mudzanga wako kupenya mumotokari.
★ Notice INOKOSHA: Tapota tora kuregawo kwemaminitsi 3 neimwe nguva pashure maminitsi 15 dzichimhanya kushanda, Kana muine wobvunzisisa, ndapota usazeza isu paemail, isu achakupai mhinduro mumaawa 24.
Pro-nedutu gadziriro Hwakataura guruva riri kure firita.
Bagless magadzirirwo ane zvakanakira okuchenesa.
Dual kudzora ruzha.
Ngaakushongedzei nezvinhu zvekushandisa zvakasiyana yakachena kusangana zvakasiyana okuchenesa zvinodiwa.
Shimono vacuum kunyange zviduku asi simba kubvisa simba.
Shimono vacuum zviri nyore kushandisa, dzakachena uye okuchengetera zvinhu.
Pro nedutu pamwe dzakawanda bvumidzwa.
Chero ruvara inogona kusarudzwa pachena kwamuri.
Tichafara chengeta paIndaneti basa ose zuva.
Tichafara pindura Email yako uye Fax mumaawa 24.
Unogona kutidanira chero nguva kana muine mubvunzo pamusoro zvinhu zvedu
Battery vakavhiyiwa Car Vacuum Cleaner
Most Yakasimba Car Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner For Car Cleaning Chishandiswa